सहकारी आवास परियोजना अघि बढाउदै शुक्रपथ सहकारी - Cooperative News Service
सहकारी आवास परियोजना अघि बढाउदै शुक्रपथ सहकारी
काठमाडौँ स्थित शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सहकारी आवास परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
संस्थाको शनिबार सम्पन्न आठौँ वार्षिक साधारणसभाले आवास, कृषि र उर्जामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाले सहकारीको मोडेलमा आवास निर्माण गरेर सदस्यलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको सचिव तथा कार्यकारी प्रमुख नरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो । परियोजना सदस्यको सहभागितामा अघि बढाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सहकारीबाट उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । सहकारी व्यवस्थित गर्न सके देशको विकास सहकारीबाटै गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो । पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्दले सहकारी सर्वसाधारणका लागि दुःख र सुखमा काम लाग्ने माध्यम बनेको व्यक्त गर्नुभयो । यसले आर्थिक मात्र नभई सामाजिक रुपमा समेत प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ थियो ।
न्यूरोडमा प्रधान कार्यालय रहेको सहकारीका तीनकुने, चाबहिल, गोगंबु र कालीमाटी सेवाकेन्द्र सञ्चालित छ । सहकारीको चार हजार सदस्य छन् भने १६ करोड ५६ लाख रुपैँया शेयर पूँजि रहेको छ । संस्थाले एक अर्ब सात लाख ३० हजार रुपैँया निक्षेप सङ्कलन गरी एक अर्ब १२ करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।
यस्तै संस्थाको विभिन्न कोषमा चार करोड रहेको छ । संस्थाले यस वर्ष दुई करोड ७९ लाख मुनाफा आर्जन गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि सहकारी
कहाँ कहाँ पुगे समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरु ?
सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सहकारीको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने
तेह्रथुममा दुग्ध प्रशोधन उद्योग खोल्न जनप्रतिनिधि इच्छुक
कृषि र उर्जामा लगानी बढाउदै सहकारी बैँक